Vaovao Archives - Page 2 sur 3 - FJKM Québec - Canada
Home > Vaovao
Fisindàna Chalet 2018 Auberge Terre de Rêve Saint-Léon-de-Standon
20 septembre 2018 by Njaka Ramanandafy
Hits: 285Tontosa ny sabotsy 15 sy ny alahady 16 septambra teo ny fisindàna notanterahan’ny fiangonana tany amin’ny Auberge Terre de Rêve Saint-Léon-de-Standon. Isaorana ny Tompo noho ny fotoana rehetra, indrindra fa ny andro tsara izay nahafa-po tokoa. Maneho fankasitrahana ihany koa antsika rehetra, na ny nijanona natory, na ireo tonga ny sabotsy na ny alahady […]
Hits: 388« Avy amin’ ny vavan’ny ankizy madinika sy ny zaza minono no nanamboaranao fiderana. » Sal. 8,2 Misaotra an’Andriamanitra lehibe nohon’ny fitsimbinany ka nahavitàna ny taom-pianarana 2017-2018 ny Sampana Sekoly Alahady. Misaotra ny mpianatra, ny Ray aman-dReny ary ny mpampianatra nahatontosa izany. Misaotra ny Fiangonana manontolo koa nanotrona ny Sampana nandritra iny taona iny. Ny fivoahana an-tsaha tamin’ny […]
11 jiona 2018 – Fananganana ny Dorkasy teto amin’ny FJKM Québec
15 juillet 2018 by Bako Raveloson
Hits: 347Ry havana malala ao amin’ny Tompo, ny voaloanteny dia misaotra an’Andriamanitra satria tafatsangana tokoa ny sampana dorkasy eto Québec anio. Misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina mivady ihany koa izay vy nahitana sy angady nananana ka nahatonga izao sampana izao ho tafajoro soa aman-tsara. Ary tsy adino koa anefa isika mpianakavy ny finoana eto amin’ny […]
2 jiona 2018 – Voka-dehibe voalohany – FJKM Québec
4 juin 2018 by Bako Raveloson
Hits: 427Isaorana indrindra ny Tompo fa tontosa soa aman-tsara ny sabotsy 2 jiona 2018 teo ny Voka-dehibe voalohany nokarakarain’ny FJKM Québec. Isaorana manokana etoana koa ianao izay nitondra am-bavaka, nanome vola aman-karena, nanotrona anay ahatontosa izany. Andriamanitry ny fiadanana anie hamaly fitia anao! Indro atolotray anao eto ny raki-tsary izay nahitàna ny hafaliana sy ny […]
13 mey 2018 : Fananganana ny SLK teto amin’ny FJKM Québec
Hits: 567Tontosa soa aman-tsara, ny alahady 13 may teo, ny fanokanana ny Sampana lehilahy kristiana (SLK) teto anivon’ny FJKM Québec. “Ka ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatry ny halehiben’ny fahafenoan’i Kristy” (Efes. 4 :13)
Hits: 317Tontosa soa aman-tsara ny alahady 6 may 2018 lasa teo, teto anivon’ny fiangonana FJKM Québec, ny fanokanana ireo Diakona mianadahy. Miisa ho 12 zany zao ny isan’ny Diakona eto amin’ny FJKM Québec. Mirary azy ireo ahatontosa ny adidy napetraky ny Tompo eo aminy isika ary mitrotro azy ireo am-bavaka. ” Miorena tsara, aza miova, […]
Hafatra Pentekosta 2018 avy amin’ny Mpitandrina mivady sy ny Fiangonana
19 mai 2018 by Njaka Ramanandafy
Mampiavaka ny mitondra fiangonana FJKM eto Québec
15 mai 2018 by Njaka Ramanandafy
Hafatry ny mpiandraikitra Foibe MF 04/ SL XVIII : Aprily 2018
2 mai 2018 by Bako Raveloson
Hits: 312Fiarahabana Ry Havana, Hampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin’ny fahalalana tsara an’Andriamanitra sy Jesoa Kristy Tompontsika. (2 Pet. 1/2); Ny Mpiandraikitra Foibe izay nivory ara-potoana teto Antananarivo tao amin’ny Centre de Formation et du Développement (CFD) Ampandrana, tamin’ny 18-25 Aprily 2018, dia miarahaba antsika rehetra nahatratra ny Paska 2018, ary […]
Nahoana isika no manao fanompoampivavahana rehefa andro niakarana
25 avril 2018 by Njaka Ramanandafy
Hits: 175Fa maninona isika no tokony manao fanompoampivavahana rehefa andro niakarana?